AMISOM oo sheegtay inay qaadayso Dulaan ka dhan ah Al shabaab | SomaliSwiss Wararka Somaliswiss
Home / Home / AMISOM oo sheegtay inay qaadayso Dulaan ka dhan ah Al shabaab
AMISOM oo sheegtay inay qaadayso Dulaan ka dhan ah Al shabaab
Wakiilka Midowga Africa ee Soomaaliya Maman Sidikou ayaa shaaciyay in AMISOM ay diyaarisay Qorsho Military oo Al shabaab looga saarayo Deegaanada ay ka joogaan dalka.
Wuxuu sheegay in Ciidanka AMISOM loo dhamystiray Qalabkooda Military & Tasiilaadka kale ee ay u baahan doonaan intii socdo Dagaalka Qorshahiisa ay dejiyeen, kaasi oo la qaadi doono Todobaadyada soo socda.
Maman Sidikou oo sidoo kale ah Madaxa AMISOM, ayaa Warkan ku sheegay War Saxaafadeed uu soo saaray, waxaana uu intaasi raaciyay hadalkiisa in Ciidanka Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya ay kala qeyb qaadan doonaan Gulufka Dagaal.
“Waxaan tagi doonaa Deegaanada ugu danbeeya ee Al shabaab joogaan, waana ka saari doonaa, waayo Al shabaab Luuqadda ay yaqaanaan waa Xabad & Dagaal, taasina waan u diyaargarownay, sida uga dhaqsaha badan ayaa u fulin doonaa,” ayuu yiri Maman Sidikou.
Dagaalka lagula jiray Al shabaab ayaa Hakad ku jiray Sanadkii 2014, kadib markii AMISOM laga jaray Mushaaraadka & Qalabkii Military ee ay ka heli jireen Midowga Yurub & UN-ka.
RW Cumar C/rashiid ayaa sheegay dhawaan in Al shabaab ay ku sugan yihii dhulka Soomaaliya 20%, waxaana uu ku hanjabay inay uga adkaan doonaan Gulafka Dagaalka ee hadda socda, ee sida wadajirka ah uga qeyb qaadan doonaan AMISOM iyo Ciidanka DFS.